Zvakakanganiswa Crypto makambani. mhosho 3 - Blockchain News
Kurega kuchengeteka matanho
Bhizimisi iri cryptocurrencies Rinobatanidzwa dzakakwirira nengozi, kusanganisira somugumisiro kuvapo pamusoro pawaitengesa vakawanda all scammers vanoshandisa nzira dzakasiyana-siyana kurwiswa kuwana crypto-nemari kuti makambani. saka, maererano kuziva cryptotrader Peter McCormack, kurwisa Crypto Wallets zvinoratidzika daily. The exchanges vari zvakare pasi kugara macheki simba.
Mumwe wokuisira ane cryptocurrency anofanira kuziva kwaniso kutyisidzira uye vachengete zvokungwarira zvose kana kushanda cryptocurrencies:
– Sarudzai nzira yokuchengeta cryptocurrency: zviri kushandisa chando wallets vachivaurayisa akatsigira;
– Shandisa zviviri-chinhu authentication of mushandisi
– Gadza yakavimbika Anti-utachiwana purogiramu
– Never buritsa kiyi dzako dzakavanzika
– Nguva dzose tarisa kero wallets uye Links
– Iva yakavimbika hurongwa mavara echivande uye vagare-mitsara
Uyewo varambe mavara echivande dzako uye Sid-anoshamisira panzvimbo yakachengeteka, zvimwe zvingada kudzokorora njodzi Mark Frauenfelder, uyo 2017 anenge akarasikirwa BitCoins vake kupfuura $ 32,000. Uye zvose nokuti akarasikirwa semucheka ine pasiwedhi pamusoro 24 Mashoko kubva nechando chikwama. Achiziva kuti akanga asina kuyeuka PIN-remitemo kuti chikwama, akanga vakavhunduka kubudikidza nokuziva kuti haagoni kuwana cryptocurrencies ake nenzira ipi.
Frauenfelder akateterera kuna hwokugadzira kutsigirwa crypto chikwama Muiti, akanyora forum, vakatsvaka nzira Hack iye uye kunyange akatendeukira kune hypnosis nyanzvi, asi izvi zvose hazvina kuuya achida mugumisiro.
Semagumo, akabatsirwa wechiduku Hacker, uyo akanyora mirayiridzo sei kutsemuka software kuti chando chikwama. zvisinei, zvaimuitirei mwedzi yakawanda mupfungwa, mari uye nekutumwa kuti Hacker kuti kuwanazve pasiwedhi uye Sid-okuti.
Zvakakanganiswa Crypto makambani. mhosho 2 Zvakakanganiswa Crypto makambani. mhosho 4
Previous Post:Zvakakanganiswa Crypto makambani. mhosho 2
Next Post:Ethereum Foundation akazivisa vanowana ari “sefungu dzorubatsiro okutanga” pamusoro $ 2.5 miriyoni